एक्लै भएको बेला हार्ट अट्याक भएमा यसो गर्नुस …. तपाई बच्नुहुन्छ ! जानकारीका लागी सेयर गरौ – Global Link Career Foundation
एक्लै भएको बेला हार्ट अट्याक भएमा यसो गर्नुस …. तपाई बच्नुहुन्छ ! जानकारीका लागी सेयर गरौ
January 29, 2019 May 31, 2021 9849143786
हार्टअट्याकका कारण धेरैले ज्यान गुमाउनु परिरहेको छ । हार्टअट्याकले धनी वा गरिव भन्दैन । यो रोगले उमेर पनि भन्दैन । सानो तथा ठूलो जोसुकैलाई आक्रमण गर्न सक्छ । हार्टअट्याक यो समय र यति बजे आउँदै छुँ भनेर भनि हाल्ने बेथा पनि होइन । तर हार्टअट्याक हुनासाथ के गर्ने भन्ने उपायका बारेमा जानकारी भएको खण्डमा यो बेथालाई सजिलै जित्न सकिन्छ ।
हार्टअट्याक पूर्व जानकारी अर्थात घोषणा गरेर आउने रोग होइन । र हार्टअटयाकले आक्रमण गर्यो कि मानिसहरुले यसबाट बच्न अनेक संघर्ष गर्नु पर्ने हुन्छ । यदि तपाईलाई आफ्नो मुटुको चालमा अचानक अनावश्यक परिवर्तन अर्थात गलत संकेत को अनुभव भयो र आफू फेन्ट हुँन्छु जस्तो लाग्यो भने, त्यस बखत तपाई सँग होश गुमाउनु पूर्व जम्मा दश सेकेन्ड समय रहन्छ । तर धेरै मानिसहरुलाई आफैले आफ्नो उद्धार गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा थाहा नहुन सक्छ । यसका लागि आफू आक्तिनु र हडबडाउनुु हुँदैन । साथै आफू बेहोश हुनबाट पनि जोगिनु पर्छ । र त्यसका लागि सकेसम्म खोकिराख्नु पर्छ ।
खोक्ने तरिका: खोक्नु भन्दा पहिले ठूलो स्वाश लिनुपर्छ । गहिरो र लामो समयसम्म खोक्नुपर्छ । यसरी खोक्नुहोस् ताकि तपाई आफ्नो फोक्सोमा जमेको थुक, खकार तथा अन्य केही कुरालाई बाहिर फाल्न चाहँदै हुनुहुन्छ ।
प्रत्येक २ सेकेण्डमा नविराइकन श्वास लिनुपर्छ र खोक्नुपर्छ । यो प्रक्रिया डाक्टर नआए सम्म वा मुटुको धड्कन नरमल नभएसम्म जारी राख्नुपर्छ । गहिरो श्वास लिंदा अक्सिजन फोक्सो भित्र प्रबेश गर्छ र खोक्ने कार्यले एक प्रकारको दबाब पैदा गर्छ ।
यसले तपाईको मुटु र रगत संचारको गतिमा नियमितता ल्याउँछ । यस प्रकारको पे्रशर अर्थात दबाबले तपाईको मुटुको धडकनको गतिलाई ब्यालेन्समा ल्याउन मद्धत पुर्याउँछ । डाक्टर नआइपुगुनजेल सम्मका लागि यो एकदमै भरपर्दो उपाय हो जसले थप नोक्सानी हुन दिंदैन । मुटुरोग बिशेषज्ञहरु ग्यारेनटीका साथ भन्छन्, “यदि एक जनाले यो उपाय दश जना सम्म पुर्याएको खण्डमा, कमसेकम एक जनाकोे ज्यान बचाउन सकिन्छ ।”
तसर्थ, यो सन्देस धेरै भन्दा धेरै मानिसहरु सम्म पुर्याउनुहोस् । तपाईको सानो सहयोगले धेरैको ज्यान बचाउन सक्छ । Share गर्न अल्छि नगरौ
ओपन डोर्स रिपोर्ट : अमेरिकी विश्‍वविद्यालयमा भर्ना हुनेमा नेपाली विद्यार्थीको सङ्ख्या तीव्र गतिमा बढ्दो
एक बच्चा लाइ आँप को रुख सारै मनपर्थ्यो……मर्म स्पर्शी कथा